विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ“ जनवरीमा कोरोनाबारे दुनियाँले ध्यानै दिएन” - Jhilko
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ“ जनवरीमा कोरोनाबारे दुनियाँले ध्यानै दिएन”
काठमाडौ। जनवरीको अन्त्यतिर कोरोनाभाइरस वैश्विक महामारीलाई नियन्त्रण गर्न गरेको आग्रहलाई विश्वका देशहरूले ध्यानै नदिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकले जनाएका छन् ।
विश्वका संगठन तथा नेताहरूबाट आलोचना खेपिरहेका महानिर्देशक डा. टेड्रोज अधानोम गेब्रेयससले यस्तो बताएका हुन् ।
भर्चुअल प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशकले भने “ जनवरी३०मा हामीले कोरोनाभाइरस कोभिड–१९को वैश्विक आकस्मिकताको उच्चतम तहबारे घोषणा ग¥यौं । त्यतिखेर सम्झिनु भयो भने चीन बाहिर ८२ संक्रमित केस थियो । ल्याटिन अमेरिका वा अफ्रिकामा कुनै संक्रमण थिएन । युरोपमा मात्रै १० केस थियो । बाँकी विश्वमा कोरोनाको कुनै केस थिएन् । विश्वले त्यतिखेर ध्यानदिनुपर्ने थियो ,दिएन् ।”
जुन देशले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सल्लाहलाई ध्यान दिए ती देशहरूको अवस्था राम्रो रहेको बताउँदै महानिर्देशकले संगठन सल्लाह दिने हैसियतमा रहेको छ कुनै सरकारलाई यस्तो गर भनेर आदेश दिने हैसितमा नरहेको बताए ।
साथै उनले भने“ विश्व स्वास्थ्य संगठनको आलोचना गर्नेहरूले आफै पनि जनवरीमा जारी गरिएको त्यो घोषणा ढिला गरी ल्याइएको बताइरहेका छन् तर तिनीहरूले त्यतिखेर पनि ध्यान दिएनन् ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व स्वास्थ्य संगठनका सबै भन्दा कठोर आलोचक मध्येका एक हुन् । उनले संगठनले गम्भीरतापूर्वक भाइरसको प्रसारमा रोक लगाउने प्रयास गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । साथै उनले अमेरिकाले संगठनलाई दिने गरिएको कोष कटोती समेत गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वलाई यो वैश्विक महामारीबारे सचेत गराउँदै सल्लाह दिइरहेका थिए त्यतिखेर अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकामा यो भाइरस धेरै राम्ररीमा नियन्त्रित रहेको बताएका थिए ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि विश्व स्वस्थ्य संगठनको चेतावनीलाई नजरअन्दाज गरेका थिए । अहिले विश्वभर २ लाख भन्दा बढी मानिसको कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भइसकेको छ ।
अमेरिकाबाट चीन निर्यातमा प्रतिबन्ध
ओजोन तहमा परेको ठूलो प्वाल बन्द !
भारत र चीनबीचको सीमा विवादमा मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयारः...
ट्रम्पले बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भारत र चीनबीच पछिल्लो पटक देखिएको सीमा विवादको...
सिन्धुलीमा चट्याङ लागेर मृत्यु
वर्षासँगै परेको चट्याङ लाग्दा ढलान गर्दै गरेको ठाउँबाट जमिनमा खसेर गम्भीर घाइते...
सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको सक्रियता
कडाइ गरेसँगै भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका विभिन्न सामान तथा तस्करीमा संलग्नसमेत...
एक विद्यार्थीलाई हप्तामा १५ घण्टा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने र एक घण्टाको रु ७५ पारिश्रमिक...